Hanova angon-drakitra an-tserasera! - Geofumadas
Jolay, 2015 jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
MyGeodata dia fanompoam-pivavahana an-tserasera mahagaga izay ahafahana manova ny angona avy amin'ny jeospasy, miaraka amin'ny format CAD, GIS ary Raster samihafa, mankany amin'ny rafitra sy rafitra hafa.
Mba hanaovana izany dia mila mampakatra ilay rakitra fotsiny ianao, na manondro url amin'ny toerana itahirizany azy. Ny fisie dia azo alefa tsirairay, na ampidirina anaty ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, LZ, Z, ARJ, CAB extensions, ankoatry ny hafa.
Ny serivisy dia manohana endrika endrika maherin'ny 60 sy endrika raster mihoatra ny 100. Amin'ny tranga CAD / GIS dia azo ampidirina ireto endrika manaraka ireto:
Comma separa misintona (.csv)
Fandefasana format taloha RUIAN
OpenStreetMap XML sy PBF
Birao iraisam-pirenena / Bina
Sarin'ny Arc / Infos .E00 (ASCII)
US Census TIGER / Lalana
VRT - Datasource virtoaly
Daty Daty Daty PCI Geomatics
X-Plane / Flightgear avy amin'ny angovo avy amin'ny seranam-piaramanidina
Sary famindrana Hydrographic Transfer
Aeronav FAA rakitra
Idrisi Vector (.CT)
Sokafy ny tahirin-tsinjara
Kitendry XML Open Open XML
Storage sy eXchange Format
Raha vao navoaka ny angon-drakitra, dia manana mpijery amin'ny OpenStreetmap amin'ny sehatra ny seha-pifaneraserana, izay ahitana ny fampahafantarana izay nasiana azy.
Ireto ambany ireto dia azonao atao ny manefy endrika mampiavaka ny fanovana, toy ny fanovana datum na rafitra mandrindra. Ohatra, manana angon-drakitra ao amin'ny WGS84 izahay ary te hampita izany amin'ny ITRF91, SRS vaovao.
Azonao atao ny misafidy karazana tarehin-tsoratra, tena azo ampiasaina amin'ny fikirakirana accents, litera ñ na marika avy amin'ny fiteny hafa. Avy eo ianao dia afaka misafidy izay saha antenaintsika hotehirizina.
Avy eo dia afaka mamoaka ny valiny amin'ireto rindrambaiko ireto:
Vokatra format format
Farany, azo alefa ny rakitra.
Ny serivisy dia maimaim-poana, miaraka amin'ny haben'ny rakitra matihanina hatramin'ny 20 MB sy 100 MB ho an'ny raster, fa ny fanolorana fanomezana an-tsitrapo dia afaka manafoana ireo fameperana ireo, ary koa ny fahafahana mitazona azy ireo.
Mandehana any MyGeodata
Ity ny lisitra manontolo amin'ny fifanakalozan-kevitra azo atao:
Previous Post«Previous 20 Dingana iray hananganana tanàna iray avy amin'ny scratch
Next Post Ny fandosiran'i Chapo Guzmán, asan'ny injeniera avomanaraka »